Sheet Die Series-JW-P-C2 - China Sheet Die Series-JW-P-C2 mpamatsy, Factory –Jwell
Ny fananganana tsikelikely ny endrika fitetezana rano sy ny fantsom-pitaterana karazana soroka fisaka, miaraka amin'ny teknolojia fanodinana triangle, ny fizotran'ny fomba tohatra, mahomby esory ny fizotran'ny fitrandrahana tosika avo lenta mba hamolavolana ny endrika am-bava. molotra modulus elastika. fanitsiana marina, miaraka amin'ny bara fisakanana fisorohana dia afaka manafoana ny fitaovana trandrahana, mamaha ireo fitaovana lo. Olana noho ny fijanonana lava loatra. Ny molotra maty dia afaka mifanakalo, arakaraka ny hateviny samy hafa miaraka amina molotra maty malalaka.
Azo ampiharina amin'ny takelaka PC, PS, PP, PE, PLA, PVC tokana misy sosona na takelaka maro sosona.
Haingam-pandeha haingam-pandeha ho an'ny fantsom-panafody HDPE / Sodina